Armenia dia mampianatra fiofanana amin'ny fitantanana mahomby ny fampandrosoana fizahan-tany maharitra
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Armenia dia mampianatra fiofanana amin'ny fitantanana mahomby ny fampandrosoana fizahan-tany maharitra
Armenia dia mamolavola ny ho aviny ho todika maharitra maharitra, manangana fahaiza-manao amin'ny fandrindrana fizahan-tany mahomby sy fitantanana. Vondron'olona matihanina maro momba ny fizahantany sy ny fampandrosoana manerana an'i Armenia no nanatevin-daharana ny fandaharam-panofanana mifangaro ao amin'ny PM4SD (Project Management for Sustainable Development), ary nahavita tamim-pahombiazana ny fizarana voalohany, taranja fampiofanana an-tserasera mandritra ny 3 herinandro. Avy eo ny mpandray anjara dia hanao fanofanana mifanatrika mivantana eny amin'ny toerana atao ao Yerevan (20-21 desambra 2018), hamita ny fiofanana ataon'izy ireo ary hiomanana amin'ny fanamarinana PM4SD-Foundation, eken'ny APMG International.
Alohan'ny fampiofanana eto an-toerana, amin'ny 19 Desambra, hetsika iray ampahibemaso, "Armenia, ny làlana mankany amin'ny fizahan-tany maharitra" dia karakarain'ny UNDP, miaraka amin'ny tanjona hitondra ny mpandray anjara fototra amin'ny rojom-pizahan-tany fizahan-tany mba hanangana vina iraisana sy drafitra asa ho an'ny fampandrosoana fizahan-tany maharitra eo amin'ny sehatra ahatongavana. Ny hetsika dia mikendry ny ho hetsika fandefasana koa ny mari-pahaizana PM4SD any Armenia. Ny torolàlana PM4SD dia nadika tamin'ny teny Armeniana koa, noho ny fanohanan'ny UNDP.
“Manome tombony lehibe ho an'i Armenia ny fizahantany, ary indrindra ho an'ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitra sy toerana tsy fantatra, saingy mila miantoka ny fitomboan'ny fizahan-tany izahay. Izany no antony maha-zava-dehibe ny mifantoka amin'ny fiofanana sy ny fananganana fahaiza-manao. Miaraka amin'ny maro amin'ireo mpitantana ny tetik'asa sy mpanomana tetik'asa no voamarina fa PM4SD, afaka mamorona manam-pahaizana manokana izahay izay afaka hitondra tombony azo tsapain-tanana sy maharitra amin'ny alàlan'ny tetikasan'ny fizahantany. " - Arman Valesyan, mpandrindra ny tetikasa, Tetikasa UNDP Armenia fampandrosoana ny fizahan-tany ambanivohitra (IRTD)
Natolotr'i Jlag (Organisation Training Accredited PM4SD) sy TrainingAid ho an'ny UNDP Armenia, ity programa fampiofanana mifangaro ity dia manome ny fahafahan'ny mpandray anjara mampihatra fanao tsara indrindra amin'ny tontolon'ny tetikasany manokana, manampy amin'ny fanatsarana ireo tetik'asa eo an-toerana sy isam-paritra manohana ny fampandrosoana fizahan-tany maharitra sy ny fitantanana ny toerana haleha.
Ity programa fampiofanana mifangaro ity dia natolotra tao anatin'ny tetik'asa Integrated Rural Tourism Development (IRTD), izay vatsian'ny Federasiona Rosiana ary tanteraky ny UNDP Armenia miaraka amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny Ministeran'ny Fitantanana sy ny fampandrosoana ny teritery.
Ity fiofanana ity dia hanatontosa hetsika stratejika voalohany hanamarinana ny fahaiza-mitantana maharitra, miaraka amin'ny tanjona hanohanana tanjona maharitra amin'ny famoronana fotoana maharitra hanana fidiram-bola hahazoana vola hampihenana ny fahantrana any ambanivohitra, ary hanomezana hery ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina hahatratra fampandrosoana maharitra.
“Nahafinaritra tokoa ny nianatra momba ohatra momba ny tetik'asa miovaova sy mieritreritra mialoha manerana an'i Armenia, miresaka ireo fanamby lehibe amin'ny fampandrosoana sy ireo olana maharitra amin'ny alàlan'ny fizahantany. Miaraka amin'ny fahalalàn'izy ireo vao nahomby tamin'ny fitantanana tetikasa mahomby, ireo mpandray anjara amin'ny fampiofanana azonay dia afaka manatona ny tetikasan'izy ireo amin'ny fomba hendry sy mahomby ary mamokatra kokoa, mifantoka amin'ny fanatsarana ny fampandrosoana maharitra ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra. " - Silvia Barbone, Trainer PM4SD, Tale mpitantana, Jlag
Ny fanamarinana PM4SD dia mari-pahaizana lehibe iray ho an'ireo mpizahatany maharitra, maneho ny fahaizany mamolavola tetikasa fizahan-tany vaovao ary manome vokatra mahomby sy tombony maharitra.
Lufthansa dia manolotra ny fivoriana fanao isan-taona EY ho mpanamarina vaovao
Nanampy ny zotra amerikana vaovao fahatelo ho an'ny taona 2019 ny TAP Air Portugal